Voka-pifidianana Mamoaka Izay Mety Ho Fandehan’ny Fifidianana Hafa Ao Azerbaijan · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Novambra 2015 4:07 GMT
Mehriban Aliyeva, vadin'ny filoham-pirenen'i Azerbaijan, tsy dia mampiasa loatra ny sezany ao amin'ny parlemanta. Wikipedia image.
Tamin'ny vokatra izay tsy nanaitra ny olona, nahazo ny maro an'isa tamin'ny fifidianana parlemantera tamin'ny 1 Novambra ny antokon'ny fitondrana an'ny fianakavian'ny mpitondra.
Na izany aza, raha tsy misy ny zava-baovao momba ny Antoko Azerbaijan Vaovao mankatò ny filoha Ilham Aliyev nahazo fandresena miezinezina, nisy ireo lafin-javatra sasany mahaliana izay nanamarika ity latsa-bato ity tsy tahaka ireo hafa taloha.
Ny anankiray, tsy raharaha maimaika miseho amin'ny ora farany amin'ny androm-pifidianana intsony ny hala-bato. Ny maraina dia efa nitatitra ireo mpanara-maso tsy miankina fa nisy ny fandikan-dalàna lehibe:
Hosoka. Hala-bato ao amin'ny Fari-pifidianana faha-12, ao amin'ny birao fandahatsam-bato faha-30 sy faha-23. [Sioka tamin'ny fanombohan'ny fandatsaham-bato].
Nahomby kokoa sy voalamina tsara kokoa noho ny teo aloha ny mivezivezy mandatsa-bato. Tompon'andraikitra tamin'ny fitetezana birao sy mandatsa-bato amin'ireo toerana rehetra andehanana ireo vondrona vehivavy, mpianatra, sy ny vondron'olona mifangaroharo hafa :
[Mpanao gazety Ulviyya Ali naka ireto sary ireto]: Fari-pifidianana faha-21. Biraom-pifidianana 1 sy 2. Olona maro entina hivezivezy amin'ny fandrotsaham-bato.
Ity lahatsary eto ambany ity kosa dia mampiseho hala-bato hafa tao amin'ny faritra faha-3 ao Surakhani. Tamin'ity indray mitoraka ity, tratra ambody omby tamin'ny hala-bato ny filohan'ny fari-pifidianana.
Nihomehy mihitsy ireo manampahefana Azeri sasany amin'ny famitahana ny olom-pirenena, araka ny filazan'ireo mpanangom-baovao ao an-toerana. Azo antoka fa efa nanjavona ela ireo singa mahamenatra amin'ny hala-bato amin'ny fifidianana.
Efa nosoloina fahavononana sy fitokisana bontolo izany, hita amin'ny filazan'i Aflatun Amashov solombavambahoaka vao voafidy fa “raha nisy ny fandikan-dalàna dia kely dia kely izany, ary tsy hisy fiantraikany amin'ny voka-pifidianana.”
Ireo anefa no fifidianana voalohany tsy nisy fanaraha-maso avy amin'ny vaomiera iraisampirenana mpanara-maso azo itokisana. Nanafoana ny iraka nataon'izy ireo alohan'ny fifidianana ny ODIHR an'ny OSCE, ny OSCEPA ary ny Parlemanta Eoropeana.
Ny hany mpanara-maso iraisampirenena tonga dia ny solontena Parlemantera ao amin'ny Vaomiera Eoropeanina [PACE]. Saingy takon'ny “diplaomasian'atodintrondro” sy ny tatitra namboamboarina tamin'ny iraka fanarahamaso teo aloha ny fifandraisan'ny PACE amin'i Azerbaijan.
Noho izany, nandiso fanantenana izany raha tsy manafintohina ny fanambarana nataon'ny solontenan'ny PACE toy izao :
Solontenan'ny PACE: Mifanaraka amin'ny fenitra iraisampirenena ny fifidianana
Na dia teo aza ireo kandida 1.200 voasoratra anarana, nesorina tamin'ny hazakazaka parlemantera ny 500 ka kandida 767 sisa no nifaninana hahazo ny seza 125 ao amin'ny antenimiera. Niala an-daharana ny kandidan'ny antoko mpanohitra lehibe. Nanao ankivy tanteraka ny fifidianana ny vondrona mpanohitra avy amin'ny Vaomieram-Pirenena.
Angamba ny vadin'ny filoha Iliyev, Mehriban Aliyeva, no nahazo ny seza azo antoka indrindra ao amin'ny parlemanta, izay tafaverina teo amin'ny toerany tamin'ny vato 96,7% .
Raha tsy hoe fahadisoana anarana ny fiverenana eo amin'ny toerana. Efa solombavambahoaka hatramin'ny 2005 i Aliyeva ary tsy mbola nanatrika fivorian'ny mpanao lalàna na dia indray mandeha aza. Tsy antenaina ny isian'ny fiovana.
Araka ny voka-pifidianana navoakan'ny Foiben'ny Komitim-pifidianana (CEC), afapo ny Azerbaijan Vaovao, nahazo seza 71, raha azon'ireo antsoina fa antoko mahaleotena – lazain'ny antoko mpanohitra ivelan'ny Antenimiera fa “mpanohitra sandoka” ny seza ambiny.
Afa-po tamin'ny voka-pifidianana ny iraka mpanaramaso, CIS – ahitana solontenan'ny fanjakana Sovietika hafa teo aloha izay manana olana amin'ny fanatontosana fifidianana malalaka sy marina – manamarika izy ireo fa “nilamina tsara’ ny fifidianana:
Nilamina tsara ny fifidianana solombavambahoaka tao Azerbaijan, ny filohan'ny iraka mpanaramaso CIS.
Fomba iray hamariparitana ny fizotran'ny fifidianana izany. Ny iray hafa kosa nosoritan'ny mpisera Twitter iray ao an-toerana toy izao:
Temsili Azerbaycan seçimleri 🙂 #Azerbaijan #AZvote2015 #secim2015 pic.twitter.com/R2tR6kw2yV
[Filoha Aliyev nalaina sary] Tsia! Mijanòna any an-trano, hofenoinay nyl [vatom-pifidianana]!